Posted by Tranquillus | Apr 25, 2018 | Horumarka shakhsiyeed
Haddii aad ku jirto noloshaada xirfadeed ama mid gaar ah, inta badan waa inaad doorataa xulasho.
Inkasta oo qaar ka mid ah ay ka muhiimsan yihiin kuwa kale, iyagoo garanaya sida loo sameeyo go'aanka saxda ah looma dhisi karo.
Marka ay timaaddo doorashooyinka, laba hab ayaa ka soo horjeeda, midda labada tiir oo faa'iido iyo faa'iido daro iyo mid kale oo ka kooban dareenka qofka.
Si lagaaga caawiyo inaad sameyso go'aanada saxda ah, halkan waa laba hab oo talooyin.
Habka # 1: Faa'iidooyinka iyo faa'iidooyinka daruuriga ah
Tani waa hab ay dad badani isticmaalaan si ay u doortaan. Waxay noqon kartaa mid waxtar leh maxaa yeelay waxay kuu ogolaaneysaa inaad si cad u sheegto waxa aad ku guuleysato oo aad lumiso si aad u sameyso go'aankan. Erayada ayaa la dhigaa, waa hab lagu siinayo macnaha go'aan gaadhista.
Si kastaba ha noqotee, habkani wuxuu u baahan yahay waqti iyo muujin dhab ah oo ku saabsan doorashada.
Mar walba ma shaqeyn karto, oo kaliya ayaa kaa xanaajineysa.
Habka # 2: Ku tiirsanaan dareen
Waxaa badanaa la yiraahdaa doorashada ugu horeysa ee aad sameyso waa hadba midda saxda ah.
Iyo maxaa nagu dhiirigeliyey in aan samayno doorashadani waa sida dareenkeena. Waa aragti gebi ahaanba ka duwan go'aaminta.
Halkan waa tusaale: Waa inaad tagtaa bartilmaameedka A, waxaad dooran kartaa waddo, inta badan adigoon ka fikirin.
Qofka ku tiirsan dareenkiisa marnaba ma weydiin doono doorashadiisa.
Xitaa haddii shil uu ka dhacay safarkan, waxay kuu sheegi doontaa in aayahaasi yahay.
Si aad u aamino dareenkiisa waxa kale oo uu ku kalsoon yahay naftiisa iyo inuu naftiisa u sheego in doorashooyinka la sameeyo ay sax yihiin oo nagu filan yihiin.
Cilmi-baaristu waxay muujinaysaa in go'aamo macquul ah ay inta badan yihiin kuwa ugu fiican, gaar ahaan marka ay la xiriiraan aag go'an ama xaalad khatar ah.
Talooyinkayga ku saabsan sameynta go'aanada saxda ah:
Talo # 1: Ogow sida laysugu dhagaysto
Dareenkaaga ayaa kaa caawin kara inaad sameyso go'aanada saxda ah. Runtii, dareenadu waxay u shaqeeyaan sidii qayliye oo ku siinaya macluumaad muhiim ah oo ku saabsan xaaladda.
Waxay yihiin calaamad aad u wanaagsan, waad ku faraxsan tahay oo waad ku faraxsan tahay ama murugo iyo nastalgic iska caabin ah, ogaan sida loo dhageysto shucuurtaada.
Talo # 2: Ku hay macluumaadka kaliya ee aad u baahan tahay
Adigoo cabsanaya daadad macluumaad ah, ma awoodi doontid inaad samaysid go'aanka saxda ah.
Way adkaan doontaa in la kala saaro waxa muhiimka ah iyo waxa aan ahayn.
Haddaba maskaxda ku hay waxa muhiimka ah ee muhiimka ah iyo diirada saar waxa muhiimka ah.
Talo # 3: ogaanshaha sida loo joojiyo
Joogitaanka qaboojinta go'aanka qaadashada saacadaha waa wax aan faa'iido lahayn.
Markaa, jooji fikirkaaga oo bixi.
Tani waxay kaa caawineysaa inaad si cad u aragto, waad nasin doontaa, hubaal waa in xilligaas la gaaro go'aanka saxda ah.
Ogow sida loo sameeyo go'aanka saxda ah August 23rd, 2018Tranquillus
horeSidee loo abuuraa daciifnimadaada xoog?
socdaSidee loo dejiyaa hadafyo la isku halleyn karo?